BNI Madagascar : afaka manokatra petra-bola amina tambajotra - ewa.mg
News - BNI Madagascar : afaka manokatra petra-bola amina tambajotra
ny BNI Madagascar ny afahana manokatra petra-bola amina tambajotra
(internet), na aiza na aiza. Ao amin’ny «alefa.bni.mg» ny ahazoana
manao izany, izay misokatra ho an’ny rehetra, misy faritra ho an’ny
mpanjifa, ny mombamomba ny mpanjifa angatahin’ny BNI, ary
fankatoavana ny fifanarahana ka ny code no solon’ny sonian’ny
mpanokatra petra-bola. Atao izao tolotra izao hampitombo sy
hahamora indrindra ny fikirakiram-bola. Ohatra, fifanakalozana
Mandritra ny enim-bolana amin’izao fanombohana izao, maimaim-poana
ny Pack digital, ny fikambanan’ny tolotra rehetra : petra-bola,
karatra Visa internationale Harmonia, BNI-Net sy fiantohana
Mia­rina. Afaka ny enim-bolana vao misy sarany. Mifanaraka amin’ny
tontolon’ny fiaraha-monina ankehitriny izao fom­ba vaovao
fanokafana petra-bola izao. Mamaly ny tina­din’ny tsena: tsy
mandany fotoana mifanaraka amin’ny fepetra amin’ny ady atao
amin’ny Covid-19, tsy fankanesana amin’ny toerana me­ty maro
Notsiahivin’ny BNI koa ireo tontolo eto Madagasikara momba ny
fampiasana internet (Mivoatra haingana aty Afrika i Madagasikara,
Ta­ratra 15 okt 2020, p.10). 3,84 tapitrisa ankehitriny na 14 % ny
olona mifandray amin’ny internet, 54 % amin’ny finday afahana
manokatra ny petra-bola. Azo antoka ny lafiny fiarovana avy amin’ny
traikefan’ity banky ity. Olona iray no nijoro vavolombelona
nanokatra ny petra-bolany amin’izany tambajotra izany, iray hafa
nampiseho ny fomba fanokafana izany. Mampiaina ao anatin’ny
fivoaran’ny teknolojian’ny fifandraisana eto ny BNI Madagascar.
L’article BNI Madagascar : afaka manokatra petra-bola amina tambajotra a été récupéré chez Newsmada.
Kitra: nanao pao-droa ny Fosa Jr Boeny
Tapitra tanteraka ny fifaninanam-pirenena, eo amin’ny taranja baolina kitra. Nanao pao-droa ny Fosa Jr Boeny. Nofaohin’ny avokoa mantsy ny amboara sy ny tompondakan’i Madagasikara. Niavaka ny zava-bitan’ity ekipan’i Boeny, ity.Taorian’ny nandrombahan’ny Fosa Jr Boeny ny amboaran’i Madagasikara, herinandro lasa, mbola nobatainy ihany koa ny tompondakan’i Madagasikara. Nanao pao-droa izany ny Fosa Jr Boeny, tamin’ity taom-pilalaovana ity. Omaly, nandritra ny andro fahafito farany, teo amin’ny fifanintsanana, niadiana ny ho tompondakam-pirenena, resin’ny Fosa Jr Boeny, tamin’ny isa tery, 2 no ho 1 ny AS Adema Analamanga.Lalao notanterahina tetsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina. Niady ny fihaonana, ary nifamaliana ny fanafihana teo amin’ny roa tonta. Nahatafiditra ny baolina voalohany, ny Adema, tamin’ny alalan’i Eric, teo amin’ny minitra faha-12.Niezaka nanao fanafihana kosa ny Fosa Jr Boeny, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa, nataon-dry Lekadoda sy ry Besna. Nanasahala ny isa i Sambatra, teo amin’ny minitra faha-58. Mbola nampitombo ny isa ny Fosa Jr, teo amin’ny minitra faha-78, taorian’ny alalan’ny valimm-panafihana, nentin’i Santatra, nanolotra izany, ho an’i Jean-Yves, izay namono ny baolina mora foana. Nitarika tamin’ny isa, 2 no ho 1 ny Fosa Jr Boeny.Minitra faha-85, nilalao 10 ny Adema, taorian’ny karatra mena azon’i Onja. Voafingana tao anaty faritra tsy azo ivalozana izy, saingy nolazain’ny mpitsara fa “simulation”, ka nahazoany, karatra mavo. Tsy nanaiky izany ny tovolahy, ka nanao valin-teny mahery tamin’ny mpitsara. Avy hatrany dia nivadika ho karatra mena izany. Niteraka savoritaka kely teo amin’ny mpanohana ny Adema, izany. Ny CNaPS Sport, izay resin’ny Fosa Jr teo amin’ny fiadiana ny amboara izany, no hisolo tena an’i Madagasikara, eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Caf. Tompondaka L’article Kitra: nanao pao-droa ny Fosa Jr Boeny a été récupéré chez Newsmada.
Fandaniana volavolan-dalàna :: Rava maina ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny Antenimiera
Nandà ny fandinihana sy ny firosoana tamin’ny fankatoavana ny didy hitsivolana laharana faha-001/2020 ireo mpikambana valo tamin’ireo efatra ambin’ny folo ao amin’ny Vaomiera iraisana sy ifampisasahan’ny Antenimiera roa tonta na CMP, teny Anosikely, omaly. Nirava maina ny fivoriana tsy arapotoana nampiantsoin’ny governemanta an’ireo antenimiera roa tonta rehefa tsy nisy ny hevitra tapaka. Didy hitsivolana mirakitra ny fanovàna ny andininy sasany amin’ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka ary ny fampandehanan-draharaha sy ny fampihenana ny isan’ireo mpikambana eo anivon’ny Antenimierandoholona io no raisin’ny Filohan’ny Repoblika nandritra ny fotoana tsy nisian’ny antenimiera io. Nilaza ny loholona Rakotovazaha Olivier, izay nitarika ny fivorian’ny CMP, taorian’ny fivorian’izy ireo tao amin’ny lapan’Anosikely, omaly hariva fa « niala an-daharana nivoaka ny trano fivoriana ireo solombavambahoaka enina mialoha ny nanapahan’ireo mpikambana tafajanona an’iry fehinkevitra iry ». « Tsy afaka manapaka momba an’io volavolan-dalàna io izahay ato amin’ny CPM satria tsy afaka manolotra rijan-teny amin’ny maha fankatoavan-dalàna na « ratification » no hanaovana azy, araka ny voalazan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana. Ny dikan’ny « ratification » dia tsy azo asiampanitsiana. Isan’ny olana amin’izy ity ny nanakambanana ho volavolan-dalàna tokana an’ireo lalàna fehizoro roa sy lalàna tsotra iray. Tsy mila CMP ny lalàna fehizoro fa ny lalàna tsotra no mila CMP. Noho izany, dia haverina any amin’ny governemanta ny raharaha », hoy hatrany Rakotovazaha Olivier. L’article Fandaniana volavolan-dalàna :: Rava maina ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny Antenimiera est apparu en premier sur AoRaha.
Karate-Analamanga: nihaona voalohany, omaly, ny biraon’ny ligy
Tafatsangana ny biraon’ny ligin’Analamanga, taranja karate, ka omaly ny nihaona voalohany teny amin’ny Railovy Analakely. Raha ny fantatra, miisa fito ny mandrafitra ity birao ity, ahitana ny filohan’ny ligy, ny filoha lefitra, ny sekretera jeneraly, ny tale teknika, ny mpitambola sy ny tomponandraikitry ny serasera ary ireo mpanolotsaina miisa roa. Amin’ny maha fihaonana voalohany io fotoana omaly io, fifankafahantarana eo amin’ny samy mpikambana ny nanombohana izany. Taorian’izay, niroso amin’ny dinika ho fametrahana ireo fepetra hanatsarana ny fitsipika anatiny mifehy ny ligy sy ny fifampitondrana amin’ny seksiona, eo ambany fifehezany.Tapaka nandritra ny fivoriana natao fa tsy hisy ny fifaninanana amin’ity taona ity fa avy hatrany dia hanomana ny taom-pikatrohana 2021 ny ligy. Mbola hisy ny fihaonana tsy ho ela hanohizana ny dinika, raha ny fanazavana.Mi.RazL’article Karate-Analamanga: nihaona voalohany, omaly, ny biraon’ny ligy a été récupéré chez Newsmada.